Misokatra amin'ireo laharam-pinday rehetra misy eto Antanananarivo ny "e-Hetraphone"
Toekarena – Misokatra amin’ireo laharam-pinday rehetra misy eto Antanananarivo ny « e-Hetraphone »
Nampahafantarina tamin’ny fomba ôfisialy ny tolotra vaovao « e-Hetraphone« .
Fanatsarana ny fandoavan-ketra
Ny alatsinainy 16 Martsa 2020 lasa teo,
tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely no nampahafantarin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra na ny DGI tamin’ny fomba ôfisialy ny « e-Hetraphone » . Marihina fa notanterahina tamin’ny 29 Janoary ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana momba io tolotra vaovao ho an’ny mpandoa hetra io. Ny DGI, ny Tahirimbolam–panjakana (DGT), ny vondrona mpanatanteraka ny Projet d’Inclusion Financière de Madagascar (PIFM), andaniny, ary ireo orinasa telo izay misahana ny fandoavam-bola amin’ny alalan’ny finday na « mobile money », ny Airtel Money Commerce, Orange Money Madagascar S.A., ny Telma Money S.A.., kosa etsy ankilany.
Raha tsiahivina dia tolotra iray ahafahana manao fanambaran-ketra sy ny fandovan-ketra Tambatra amin’ny alalan’ny finday ny « e-Hetraphone ». Ary ireo mpandoa hetra tao amin’ny Ivon-ketra boriborintany fahatelo sy Alasora dia efa nisitraka azy io nanomboka tamin’ny taona 2017, saingy mbola laharana Telma sy Orange ihany no nahafahana nanao izany.
Fifanaovan-tsonia teo amin’ny tompon’andraikitra ho fanamafisam-piaraha-miasa. cc : Toria Dimbiniaina
Ankehitriny kosa dia efa misokatra amin’ireo laharam-pinday rehetra misy eto Antanananarivo Renivohitra ny tolotra ary Ivon-ketra fito no voakasik’izany, dia ny Ivon-ketra boriborintany voalohany Analakely, faharoa Tsimbazaza, fahatelo Faravohitra, fahefatra Tsimbazaza, fahadimy Ambatomainty, fahaenina Ambohimanarina ary Alasora izany.
Fanatsarana ny tolotra ho an’ireo mpisitraka no tanjona, satria azo atao amin’ny toerana rehetra izay voarakotr’ireo tambazotra telo ireo ny fanambaran-ketra na ny « declaration fiscale » sy ny fandoavana ny Hetra Tambatra. Marihina fa tsy misy sarany ny fampiasana ny e-Hetraphone.
Ankoatra izay dia napetraka hanamafy ny ady amin’ny kolikoly ity tolotra vaovao ity noho izy mampihena ny fifaneraseran’ny mpiasan’ny Ivon-ketra sy ireo mpandoa hetra ary azo antoka tanteraka ihany koa satria mahazo hafatra someso, izay manana lanja mitovy amin’ireo tapakila na « récépissé » omen’ny Ivon-ketra, ny mpandoa hetra.
Tohanan’ny Banky Iraisam-pirenena amin’ny alalan’ny PIFM sy ny Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ity fanavaozana tanterahan’ny DGI ity, ary efa voakajy hanenika an’i Madagasikara manontolo.